Wasaaradda Macdanta Soomaaliya: Sahanka shidaalku waa mid rajo leh – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
31st May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Wasaaradda Macdanta & Batroolka Soomaaliya ayaa sheegtay in sahanka lagu sameeyey shidaalka Soomaaliya uu yahay mir yadadiilo wanaagsan leh.
Halkaan ka aqri qoraal ay soo saartay wasaaradda.
Muqdishu, 31 May 2015: Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka waxaa farxad u ah in ay ka warbixiso in sahanka shidaalka laga sameeyey Soomaliya uu yahay rajadiisa mid dhiira-gelin leh.
RW Cumar Cabdirashiid oo ku wajahan degmada Cadaado